दिनेश राउतले किन गर्दैनन् सिक्वेल फिल्मको निर्देशन ? « Ramailo छ
दिनेश राउतले किन गर्दैनन् सिक्वेल फिल्मको निर्देशन ?
प्रकाशित मिति : Feb 18, 2021
निर्देशक दिनेश राउतले सिक्वेल फिल्मको निर्देशन नगर्ने अडान लिएका छन् । नामको पछाडी अंक थप्दै फिल्म बनाई राख्नु व्यापारिक नाफाको पछाडी मात्रै लाग्नु उनको तर्क छ ।
‘एउटा फिल्म सफल भयो भने त्यस्को पछाडी २ या ३ राखेर बनाई राखेका छौं । मेरो चाहना चाहिं त्यो छैन । त्यो चाहिं एउटा व्यापारिक हिसाबमा मात्रै सिमित रह्यो जस्तो लाग्छ । सृजनात्मक हिसाबले पछाडीको कथाहरु मागेको छ कि छैन भन्ने कुराले मलाई चाहिं तान्छ’, आफुले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म ‘प्रकाश’ को प्रेसमिटमा उनले भने, ‘पहिलाको फिल्म हिट भैहाल्यो अब २ ३ बनायो भने हिट भैहाल्छ मात्रै भनेर मैंले सोच्दिंन । कला व्यापार त हो तर व्यापार मात्रै हो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन् । यो आफ्नो धारणाले गर्दा पनि सकेसम्म अहिले म २ नगरौं भन्ने सोचमा छु ।’
दिनेश राउतले निर्देशन गरेको ‘प्रसाद’को टिमले ‘प्रसाद २’ बनाउँदैछ । यस्तै ‘नोभेम्वर रेइन २’ पनि बन्ने चर्चा छ । यद्पी निर्देशक राउत आइकोर फिल्मस्को ‘मेरो एउटा साथी छ २’ मा अनुबन्धित भएका थिए । यो फिल्म बन्ने निश्चत नभएको बताइन्छ । नेपाली फिल्म बजारमा ‘नाईं नभन्नू ल’ र ‘छक्का पञ्जा’ फिल्मका श्रृंखला हिट छन् ।
नाजिरको अंगालोमा रोइन् स्वस्तिमा (भिडियो)
६ तस्बिरमा प्रदीप र केविकाको पोज
संचिताले खेल्ने नयाँ फिल्म कस्तो होला ?
साउथ ईन्डियन फिल्ममा स्वस्तिमाको सम्झौता
मिलन शंकर र दिपा दमन्ताको ‘सालैजो’ (भिडियो)